Posted by Tranquillus | Apr 8, 2021 | Shabakada
Iscasilaad lama malaysan karo.
Iscasilaaddu waxay ansax noqonaysaa oo keliya haddii shaqaaluhu si cad oo aan leex leexad lahayn u muujiyo rabitaankiisa ah inuu joojiyo heshiiska shaqada.
Iscasilaadda shaqaaluhu waxay ka dhalan kartaa caddeyn fudud oo hadal ah.
Heshiiskaaga wadajirka ah ayaa laga yaabaa inuu bixiyo in iscasilaadda ay ku xiran tahay nidaam gaar ah.
Kama tiigsan kartid habdhaqanka shaqaalaha kaligiis inuu doonayo inuu is casilo. Bixitaanka shaqaalaha si loogu tixgeliyo shaqo ka tagis, waa inuu muujiyaa rabitaan cad oo aan shaki lahayn oo ah inuu ka tago shirkadda.
Haddii aadan wax war ah ka haynin shaqaale, uma fasiran kartid maqnaashahan aan cudurdaarka lahayn caddeyn u ah doonis cad oo aan shaki lahayn oo ah inaad is casisho!
ma, maqnaanshaha aan cudurdaarka lahayn iyo aamusnaanta shaqaalaha ayaan kuu oggolaanayn inaad tixgeliso inuu is casilay.
Waa inaad ficil sameysaa Ugu horreyntii, waxaad siisaa qofka ay khusayso inuu cudurdaar u siiyo maqnaanshihiisa ama inuu ku laabto goobtiisa shaqada, adigoo uga digaya in cunaqabateyn laga qaado isaga haddii uusan ka jawaabin.
Maqnaanshaha falcelinta, waa inaad sawirataa cawaaqibka maqnaanshaha aan cudurdaarka lahayn, oo aad eriddaa shaqaalaha haddii aad u aragto cabirkan inuu lagama maarmaan yahay.
Haddii aad rabto inaad jabiso ...
Xaq ma u leeyahay in aan u tixgeliyo shaqaale aan imminka shaqada imaanaynin in uu is casilay? July 8th, 2021Tranquillus
horeKulanka macluumaadka - Kala-guurka Xirfadeed
socdaShaqo ka eryida shaqaalaha fasaxa jirada: qoritaan lama huraan ah laakiin intee in le'eg gudahood ah?
Saxiixa heshiiska Action Logement